बिदेशी खेलाडीको नेपालमा हरिबिजोक रुदै मागे नेपालीसंग सहयोग, नेपाली केटिसंगै बिहे गर्छू भोकभोकै…. (भिडियो) – Sanjal Nepal
Homeसमाचारबिदेशी खेलाडीको नेपालमा हरिबिजोक रुदै मागे नेपालीसंग सहयोग, नेपाली केटिसंगै बिहे गर्छू भोकभोकै…. (भिडियो)
November 12, 2020 admin समाचार 7057
लामो समय नेपालमा फुटवल खेल्न आएका विदेशीहरुको अहिले हरिविजोग भएको छ । विश्व व्यापी फैलिएको कोरोनाको कारण उनीहरुको अवस्था निकै नाजुक भएको छ । केही सामाजिक अभियन्ताहरुले सामान्य सहयोग गरेपनि उनीहरुको जिवन सहज भएको छैन । कोठा भाडा तिर्न देखि दिनहुँको छाक टार्न नै समस्या भएपछि उनीहरुले सहयोगको अपिल गरेका छन् ।
कोरोना जोखिमका कारण न खेल छ न घर जाने पैसा छ उनीहरु विदेशी मुलुकमा अलपत्र पर्नुपर्दा आफ्नो दुख सुनाउँछन । नेपालमा आएर खेलेका विदेशी खेलाडी सबैको उस्तै समस्या भएको भन्दै उनीहरुले सबैलाई सहयोगको अपिल गरेका छन् । फूटवल खेल्न नपाएको ८ महिना भइसकेको छ, क्लबमा कुनै गतिविधि भएको छैन एक खेलाडीले भने, दुई छाक खान र कोठा भाडा तिर्ने पैसा नहुँदा घर जान पनि पाएका छैनौं । यस्तो अवस्थामा परिवारको साथ भएपनि अलि सहज हुन्थ्यो तर हामी घर देखि निकै टाढा छौं उनले आफ्नो समस्या सुनाए । हेर्नुहोस भिडियो :
कोरोनाबाट पनि बच्नु छ, बिहे पनि गर्नु छ! यो जोडिले अपनाएको उपायले बिश्व भयो चकित
November 18, 2020 admin समाचार 3810
एजेन्सी– भनिन्छ गरेमा के सम्भव छैन ? मेहनत र कठीन परिश्रम गरे जे गर्न पनि सम्भव छ । आज हामी तपाईलाई यस्तै एउटा प्रेरक प्रसंगको बारेमा जानकारी दिनेछौँ । एक महिलाका दुई वटै हात छैनन्
November 20, 2020 admin समाचार 5794
November 11, 2020 admin समाचार 5602